मैले जिते टानलाई गर्व गर्न लायक संस्था बनाउँछु « Artha Path
मैले जिते टानलाई गर्व गर्न लायक संस्था बनाउँछु
प्रकाशित मिति : १९ भाद्र २०७६, बिहीबार
अञ्जन थापा कुमार, अध्यक्षका प्रत्याशी, ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)
यही भदौ २० गते ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपालको ४१औँ वार्षिक साधारणसभा हुँदै छ । यही सभाले आगामी २ वर्षका लागि नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने भएकाले यतिबेला ट्रेकिङ व्यवसायी चुनावी चटारोमा छन् । टानमा प्रजातान्त्रिक र प्रगतिशील वाम घटकको दुई प्यानल निर्वाचनमा होमिएका छन् । १७ सदस्यीय कार्यसमितिलाई १३ सय २० मतदाताले मत दिएर नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछन् । यसै चुनावी अभियानमा होमिएका युवा पर्यटन व्यवसायी अञ्जन थापा (कुमार)ले वामपन्थी समूहको नेतृत्व गर्दै छन् । धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका खहरेमा जन्मिएका थापा पोटर, गाइड बन्दै व्यवसायी बनेका हुन् । नम्र स्वभावका थापा आशाही ट्रेक्स एण्ड एक्पिडिसन प्रालिका सञ्चालक हुन् । होटेल र ट्रेकिङ व्यवसायमा लागेका थापा सबै व्यवसायीले आफूलाई मत दिने बताउँछन् । सन् २००० देखि पर्यटन व्यवसायमा लागेका थापा सफल व्यवसायी हुन् । टानमा विगतमा पनि एक कार्यकाल कोषाध्यक्ष भइसकेका उनै थापासँग गरिएको कुराकानीको सारसङ्क्षेप ः–
टान अध्यक्षमा तपाईंको उम्मेदवारी किन ?
म सन् २००० देखि नै पर्यटन क्षेत्रमा लागेको मान्छे । विगतमा पनि टानको एक कार्यकाल कोषाध्यक्ष भएर नेतृत्व गरिसकेको छु । सोही समयमा टानको कोष थप व्यवस्थित बनाउन मैले खोलेको भूमिकाका कारणले टानमा अध्यक्ष भएर नेतृत्व गर्न गइरहेको छु । अघिल्लो कार्यकालमा रहँदा मैले खेलेको भूमिकाले पनि साथीहरूको आग्रहमा नेतृत्वका लागि अघि सरेको हुँ ।
विगतमा कोषाध्यक्ष हुँदा के राम्रो काम गर्नुभयो ?
त्यतिबेला हामीले १० वटा ट्रेकिङ ट्रायल विकास गरेका थियौँ । पाँचदेखि २० दिनका ट्रेकिङ ट्रायलहरू बनाउन धेरै मिहिनेत गरेका थियौँ । विगतको कार्यकालमा मैले गरेका महत्वपूर्ण कामहरूको कारण पनि मलाई चुनाव जित्न गाह्रो छैन ।
तपाईंलाई नै मतदाताले किन मत दिने ?
यो कुरा व्यवसायी मित्रहरूले नै जर्ज गर्ने कुरा हो मैले यसो उसो भन्नुभन्दा पनि । म सदस्य हुँदै अध्यक्ष बन्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दिनँ । मेरा प्रतिस्पर्धी सदस्य हुँदै अहिले वरिष्ठ उपाध्यक्षबाट अध्यक्षमा प्रमोसन खाने दाउमा हुनुहुन्छ । संस्थामा लिडरसिपले ठाउँ छोड्दै जाने हो । अरूलाई पनि अवसर दिनुपर्छ । दुईवर्षे कार्यकाल हाम्रोलाई धेरै महत्वपूर्ण हो र यो अवधिमा जे–जति गर्न सकिन्छ व्यवसायलाई माथि उठाउन सकिन्छ ।
तपाईं निर्वाचित भएपछि के–के गर्नुहुन्छ ?
म धेरै काम गर्छु, पहिले प्रवद्र्धन गर्न नसकिएका ८–१० वटा ट्रेकिङ रुटहरू छन्, तिनलाई विदेशीसामु प्रचार गर्ने योजनामा छौँ । भर्खर आएका कम्पनीहरूले अहिले २५ लाख धरौटी राख्नुपर्ने भन्ने आएको छ, म त्यसलाई रोक्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु । पर्यटनमा केही नीतिगत समस्याहरू छन्, त्यसलाई चिर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । मेरो कार्यकालमा टान अस्पताल खोल्ने योजना छ, त्यसलाई पूरा गर्नु छ । नेपाल पर्यटन बोर्ड र टानको ज्वाइन्टमा अस्पताल खुल्ने तयारी छ । आम सिनियर र नयाँ आउने व्यवसायी अटाउन सक्ने थलो टानलाई बनाउनुपर्छ ।
पर्यटन वर्ष २०२० को पूर्वसन्ध्यामा टानको भूमिका के हुन्छ ?
नेपालको पर्यटन व्यवसायको मेरुदण्ड नै टान हो । किनकि यहाँ साना पर्यटन व्यवसायीदेखि सगरमाथा आरोहणसम्मको सम्पूर्ण काम टानअन्तर्गत हुन्छ । १ वर्षमा राज्यलाई सात अर्ब राजस्व उठ्ने गरेको छ । करिब ६० प्रतिशत पर्यटक पुरानै दोहोरिएर आउँछन् ।
तपाईं यसअघि कोषाध्यक्ष पनि भइसकेको मान्छे, टानमा जहिले पनि आर्थिक पारदर्शिताको विषय उठ्ने गर्छ किन ?
म कोषाध्यक्ष भएको समयमा टिम्स जोडिएर आयो । त्यसबेलासम्म टानमा खासै आर्थिक बजेट थिएन । टानमा मेरो कार्यकालकै बेलामा टिम्सले वार्षिक ५–६ करोड फण्ड पाउने भयो । मैले छोड्ने बेलामा टानको खातामा २ करोड बचत छोडेर आएको थिएँ । त्यसपछिका टानका नेतृत्व बढी राजनीतिक भए । उनीहरूले आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट टानबाटै गराउन थाले । त्यसपछि व्यावसायिक नम्सभन्दा बाहिर बजेट जान थाले । म एउटा विशुद्ध व्यवसायी पृष्ठभूमिबाट आएकाले टानका फण्डहरू कसरी चलाउने भन्ने मैले नजिकबाट बुझेको छु । म टानलाई गर्व गर्न लायक संस्था बनाउँछु ।
पर्यटन व्यवसायमा कसरी आउनुभयो ?
०५१ सालमा एसएलसी पास गरेपछि ०५२ मा रत्नराज्यलक्ष्मी क्याम्पसमा आईए पत्रकारिता विषय लिएर पढेँ । पत्रकारिताले पेट पाल्न गाह्रो देखेपछि मलाई साथीहरूले झोला बोकाएर पोटर बनाएर ट्रेकिङमा लैजानुभयो । अङ्ग्रेजी जान्ने भएपछि म गाइड भएँ । सन् २००० मा आफैँले कम्पनी दर्ता गरेर व्यवसायमा लागेँ । बिस्तारै व्यावसायिक क्षेत्रमा जम्दै आएँ ।
तपाईंको जित कसरी सुनिश्चित भयो ?
टानले नेतृत्वमा नयाँ चेन्ज खोजिरहेको छ । विगतको कार्यसमितिले राम्रो गर्न नसकेकाले नै मेरो विजय हुन्छ भन्ने लागेको छ । अहिले मसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने साथी टानको अहिलेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ । उहाँको टिमले गर्न नसकेका कामको मूल्याङ्कनका हिसाबले पनि मलाई सदस्यहरूले जिताउँछन् भन्ने लागेको छ । आफू वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँदा सिन्को नभाँच्नेले अध्यक्ष भएर काम गर्छुभन्दा पत्याउने कुरै छैन । आमव्यवसायी नयाँ युवा नेतृत्व चाहिन्छ भनिरहेका छन् । नयाँ र पुराना दुवै व्यवसायीहरूले मलाई मत दिन्छन् भन्ने लागेको छ ।
पार्टीको ‘पोजिसन’ तेस्रो भएपनि मूलतः हाम्रो जित भएको छ
रामसिंह यादबपूर्व स्वास्थ्य राज्यमन्त्री एवं केन्द्रिय सदस्य (नेकपा माओवादी केन्द्र) माओवादी केन्द्रले चुनावी गठबन्धन गरेर